Isu Tinopedzisa Iyo Giant Project Pakutanga | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara17 CanakkaleIsu Tinopedzisa Iyo Giant Project Pakutanga
Isu Tinopedzisa Iyo Giant Project Pakutanga
08 / 03 / 2020 17 Canakkale, GENERAL, hyperlinks, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
Tsamba ya "Isu Tinopedzisa Giant Project Pakutanga" yakabudiswa mumagazini yaMbudzi 2020 yemagazini yeRailife yeGurukota rezvekutakura uye Nzvimbo Mehmet Cahit Turhan.
Nyaya naHurumende Turhan
Sekutaura kwakaita muzivi Isaac Newton; panzvimbo yekuvaka mabhiriji, vanhu vanosara vega nekuti vanovaka madziro. Tiri kuvaka mabhiriji nekuti kusurukirwa kwedu hakubvumidze kusurukirwa uku. Isu tinobatanidza makondinendi kamwe zvakare.
Isu tinoenderera mberi nekuvaka iyo 1915 Çanakkale Bridge pazere kumhanya.
Tiri kuisa siginecha yedu pasi peimwe yemapurojekiti makuru enyika yedu.
Iyo 1915 Çanakkale Bridge, inova imwe nzira itsva yeBosphorus Kuyambuka, ichave yakareba yakareba yepakati pevhu kumiswa kwebhiriji pasi nepakati rakareba remamita 2.
Muchirongwa chikuru ichi, tavhara nhoroondo ye ofanakkale mune zvese bhiriji redu. Kumiririra 3th yemwedzi we18, kukwirira kwebhiriji redu kunosvika 318 metres.
Muchirongwa chedu, chinotarisisa zvakatipoteredza, isu tinoita mabasa edu nekunzwa kudzivirira kukuvara kwezvisikwa zvedu egungwa.
Isu hatipe zvikonzero, isu tinoenderera munzira yedu nekuisa zvese zvatinoita uye tinopa imwe yemapurojeke epasirese epasi pese pabasa rako.
Uye isu tiri kupedza chirongwa chinotarisirwa. Uye nguva refu isati yasvika chibvumirano ...
Isu tinodada nekuti tinoshandira veruzhinji, tinodyira veruzhinji.
Patinoshumira vanhu vedu, Mehmetçi wedu anochengetedza kutendeka kwenzvimbo uye kuchengetedza muganho wenyika yedu muIdlib. Zvinotora matanho ese akakosha muLibya muIdlib kutyora maoko akatambanudzirwa pamusoro pekuvimbika kwenyika yayo. Nehurombo, pakupera kwemwedzi wapera, magamba makumi matatu nematatu eMehmet Mehmet akaurayiwa semhedzisiro yekurwiswa kwakaderera kwe mauto ehutongi muIdlib, Syria. Ndinoshuvira tsitsi kubva kuna Allah kune vedu vanofira uye nekukurumidza kuporesa kune vakakuvadzwa. Hazvifanirwe kukanganikwa kuti, nerutsigiro rwenyika yedu, izvi zvinhu zvinonyengera zvichapihwa mhinduro inodiwa.
Minamato yedu needu Mehmetciks…
Kunyange zvazvo nyika iri kutambura nedambudziko, tiri kuita basa guru
Mutungamiri Yıldırım: Takatanga chirongwa che 9 muIzmir mumwedzi we11
Akaita Crazy Project More Crazy ne Havaray
Binali Yıldırım: Tichazadzisa project 2013 ku3!
Bülent Arınç Anozivisa 100 Project yeBursan's 100
Mutungamiri Yıldırım vakati hatina kutaurira vanhu vedu chero basa ripi zvatisingagoni kuunza muupenyu
3. Crazy Project yakaratidza kunhandare
Canalioğlu inoyeuchidzwa Project 61
Sirkeci Train Station (Vhidhiyo)
Prime Minister Yıldırım 4 purogiramu yakabvumirwa
Meya Yavaş achasangana neP100's project nevakuru vehurumende
Yahya Kaptan akagovana chirongwa chinodaidzwa kuti Yok No Platform Hep kwatiri tese
IMM's Coronavirus Hutsanana Team kuSeven
"Yekupedzisira Ndira Fodya Pamusha Wangu Pasina Kupisa"
Nhasi munhoroondo: 2 April 1933 branch branch Elazig
Toll Nzira uye Mutengo wePurojekiti